५ छोराछोरीकि आमालाई आफ्नै श्रीमानले दिल्लीको कोठीमा बेचिदिएपछि… – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > ५ छोराछोरीकि आमालाई आफ्नै श्रीमानले दिल्लीको कोठीमा बेचिदिएपछि…
५ छोराछोरीकि आमालाई आफ्नै श्रीमानले दिल्लीको कोठीमा बेचिदिएपछि…
admin October 6, 2021 Uncategorized 0
काठमाडौं । श्रीमती सम्झना तामाङ (नाम परिवर्तन) लाई भारतको राजधानी दिल्लीस्थित कोठीमा बेच्ने नुवाकोट दुप्चेश्वरका नवीन तामाङ र पासाङ शेर्पा पक्राउ परेका छन् । नवीन सम्झनाकी पहिलो र पासाङ दोस्रो श्रीमान् हुन् ।
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले नवीनलँई दुप्चेश्वर र पासाङलाई बिजुलीबजारबाट पक्राउ गरेको हो । प्रहरीकाअनुसार नवीनले सम्झनालाई एक लाख ६० हजार रुपैयाँ लिएर पासाङलाई बेचेका थिए । विवाहपछि पासाङले उनलाई दिल्ली लगेर बेचेका थिए ।
ब्युरो प्रमुख एसएसपी दुर्गा सिंहले पटक पटकको प्रयासपछि मात्रै नवीन र पाािङलाई पक्राउ गर्न सकिएको बताइन् । ‘संझना पाँच सन्तानकी आमा हुन् । उनको पहिलो श्रीमान् नीन हो । एक लाख ६० हजार लिएर उनले पासाङलाई बेचेका रहेछन् । आफूले किनेपछि पासाङले सम्झनासँग बिहे गरेर दिद्यदीमा लगेर बेचेछन्,’ उनले भनिन्, ‘रकम लिएर दुबै जना ढुक्कले बसेका रहेछन् ।
कर्तुत खुल्न केही समय लाग्यो । अन्नतः दुवै पक्राउ परे ।’ प्रहरीका अनुसार सम्झनालाई नविनले ०७१ मा पासाङलाई बेचेका थिए । भारतीय प्रहरी र क्याटलिस्ट नामक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा सम्झना गत ३१ जेठमा नेपाल फर्कन सफल भएकी थिइन् । उनी अहिले शक्ति समूहको संरक्षणमा छिन् । नयाँ पत्रिका
दिल्लीको आकाशे पुलमूनि अड्कियो जहाज, भिडियो एकाएक भयो भाइरल! (भिडियो सहित)
संखुवासभा प्रकरण : एउटा सकुसल, ६ जनाको शव हेर्दा प्रहरीले गर्यो यस्तो आशंका
एकाएक काठमाण्डौँ उपत्यकाको माैसम के भयो यस्तो?
नेपाल संवत् ११४० आजदेखि शुरु, भोलि सार्वजनिक बिदा !